Dalalka Iswiidhan iyo Jarmalka oo ka wada hadlaya arrimaha soo galootiga | Somaliska
Ra’iisal wasaaraha dalka Jarmalka, Angela Markel ayaa maanta soo gaartay magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan halkaas oo ay dhigeeda Iswiidhan Stefan Löfven, labadda hogaamiye ayaa ka wada hadlaya arrimo badan oo la xirriira iskaashiga u dhaxeeya labadda dowladood.
Waxaan sidoo kale aan ka marneyn arrimaha muhaajiiriinta ee ku soo qulqulay qaaradda Yurub iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagaxisadda. Labada dowladooda ayaa waxaa ku soo jabay muhaajirin ka badan intii qorshaha ugu jiray. Waxaana ay ka wada hadlayaan arrimo qaxootiga iyo siddii ay iskaashi wada jir ah u yeelan lahaayeen. Warsaxaafadeed ay labada hogaamiyee goor dhow soo gabo gabeeyeen ayaa sheegay in gacan ka geeysanayaan siddii loo taba bari lahaa ilaalada xeebaha Liibiya.
Waxaan isku af garanay inaan gacan iyo taba baro siino ilaalada xeebaha Liibiya” ayey tiri Angela Merkel oo dhinaceeda warxaafadeedka kala qeyb qaadaneeysay ra’iisal wasaaraha Iswiidhan Stefan Löfven. Toddobaadka dambe ayaa hogaamiyeyaasha dalalka Yurub ay ku kulmayaan jasiiradda Malta halkaas oo ay kaga munaaqishoon doonaan arrimaha muhaajirinta ee waqooyiga Afrika kaga soo talaabada qaarada Yurub. Waa safarkii ugu horeeyey ee Angela Merkel ku timaado dalkaan Swiidhan. Swiidhan iyo Jarmalkana waxaa ka dhaxeeya xirriir qoto dheer oo dhinacyo baadan ku saleeysan.